Induction Catheter Tipping Heating Process Application
Izicelo Zokufudumeza Eziphezulu Zokusetshenziswa Okuvamile
Lolu hlelo lokusebenza lokufaka ipayipi lokungenisa ukufudumeza luvame ukudingeka eMkhakheni Wezokwelapha lapho kwenziwa amashubhu e-catheter.
Ngokufakwa kwe-catheter ye-induction, amandla e-RF anyusa izinga lokushisa kunsimbi engagqwali noma isikhunta sethusi, ngaphandle kokuxhumana ngokomzimba nesikhunta noma ukusebenzisa ilangabi elivulekile. Iphoyinti le-catheter bese lakheka ngokufaka ishubhu lepulasitiki kudoti noma isikhunta esishisayo ukuze kwakheke imiphetho eyindilinga. Ukuphela okuyindilinga kwethubhu ye-catheter kuvumela ukuthi ishubhu lifakwe ngokuphepha kumuntu ngokuhlukumezeka okuncane ezicutshini zomzimba. Isikhunta futhi sizoba nocingo olufaka kwishubhu ukuvikela ukwakheka kwamabhlokhi Amandla okulawula okushisa anembile futhi anembile wokungeniswa alungele lolu hlobo lwesicelo sezokwelapha esiqondile. Isikhunta ngokuvamile sifakwa ijakhethi epholile yamanzi esetshenziselwa ukupholisa isikhunta esishisayo sibuyele endaweni yokushisa yokuqala echaziwe eyenza uhlelo lokungeniswa luqhutshwe yisikhathi sesikhathi / umjikelezo obekiwe.
Induction imishini yokushisa ukunikezwa kwepayipi kuqinisekisa ukuphindeka okukhulu. Inqubo yokukhiqiza iyashesha futhi inembile.
Ukuncipha kwepayipi ngokuvamile kudinga amandla aphansi. I-HLQ inezinyunithi ezimbalwa zamandla aphansi ezilungele ukunikezwa kwe-catheter futhi izoncoma imishini efanele ngokuya ngezingxenye nezidingo zohlelo lokusebenza ezihlukile.
Ukushisa I-catheter Tipping Die
Injongo: Ukushisa i-aluminium catheter tipping die kuya ngenhla kwe-2850F kungakapheli imizuzwana emi-2 kuye kwemi-5 yokwakhiwa kwempahla ye-catheter. Njengamanje, ukufudumeza kwenziwa ngemizuzwana eyi-15 ngemishini endala yokungeniswa. Ikhasimende lingathanda ukusebenzisa isimo esiqinile imishini yokushisa yokufakelwa ukunciphisa izikhathi zokushisa nokuthuthukisa inqubo esebenza kahle.
Material: I-catheter ye-Aluminium ephotha u-3/8 2/ OD no-0.035 ″ ubude ngomkhono onganamandla kazibuthe endaweni yokushisa. Impahla ye-catheter ichazwe njengefana nopulasitiki we-polyurethane. Futhi, ucingo lwensimbi olungu-XNUMX ″ ububanzi
yafakwa kushubhu ye-catheter ukuvikela ukuwa.
Isicelo: Amandla we-DW-UHF-3kW solid state induction power azimisele ukukhiqiza kahle imiphumela elandelayo:
–Isikhathi sokushisa semizuzwana engu-3.3 ukufinyelela ku-5000F nokwakha ipayipi kutholakale ngokusebenzisa i-coil (2) engaphezu kwamabili (2).
I-catheter yekhwalithi yakhiwa ngokucindezela u-1/2 ″ wethambo le-polyurethane kwisikhunta ngenkathi kugcinwa ukwakheka ngokusebenzisa ucingo olungu-0.035 to ukuvimbela ukuwa kwephubhu. Imiphumela yelabhorethri ikhombisa ukuthi ukwehla kwesikhathi okukhulu kufezekile okuzovumela ukwanda okukhulu komkhiqizo ngenkathi kunganikelwa ngekhwalithi.
Izitsha zokushisa zokukhipha: DW-UHF-3kWkW ukuphakelwa kwamandla okuqina okuqinile kufaka phakathi isiteshi sokushisa esikude esiqukethe i-capacitor eyodwa (1) ephelele engu-1.2 µF.
Ukuvama: 287 kHz
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi Ukunikezwa kwepayipi, I-Catheter Tipping Brazing, Ipayipi Tipu Ukushisa, i-catheter efaka isibopho sokungeniswa, Ukukhishwa kwe-Induction Catheter Tipping, induction Catheter Tipping Brazing, i-catheter yokufaka induction, Ukukhipha ipayipi le-RF, I-catheter ye-RF efaka ukubopha, I-catheter ye-RF ibamba ukushisa Imeyili kwemikhumbi